USPS सप्ताहन्त मा डेलिभर गर्छ? वितरण सेवाहरु को प्रकार प्रदान गरीएको हेर्नुहोस्
By भिक्टोरिया अकपान टीएमएलटी सेप्टेम्बर 20, 2021 व्यापार0टिप्पणिहरु
- USPS सप्ताहन्त मा वितरण -
हुलाक सेवा को माध्यम बाट पार्सल पठाउन अझै पनी एक व्यवहार्य विकल्प हो, उपभोक्ता को सुविधा को लागी वितरण कार्यक्रम को प्राथमिकता को आवश्यकता को आवश्यकता। र यदि तपाइँ USPS को उपयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरुलाई सप्ताहन्त मा डेलिभर गर्न चाहानुहुन्छ।
जे होस्, यो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ: गर्छ USPS आइतबार, शनिवार, वा सप्ताहांत मा डेलिभर?
के गर्ने यदि तपाइँ तपाइँको अमेजन अर्डर प्राप्त गर्नुहुन्न
पोस्ट कार्ड आकार र आयाम
सधैंको लागी टिकट र मेल सेवाहरु
USPS के हो?
प्रश्न को जवाफ दिनु भन्दा पहिले: USPS सप्ताहांत मा उद्धार गर्छ? कृपया नोट गर्नुहोस्। USPS एक संक्षिप्त नाम हो।
यो संयुक्त राज्य हुलाक सेवा को लागी खडा छ। साथै, USPS को रूप मा यो अधिक सामान्यतया ज्ञात छ सधैं त्यहाँ प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को लागी सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्न र आफ्नो जीवन लाई अधिक सुविधाजनक र सजिलो बनाउन को लागी भएको छ।
संयुक्त राज्य डाक सेवा (USPS) संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार को एक प्रसिद्ध, स्वतन्त्र एजेन्सी हो। यो संयुक्त राज्य भर मा हुलाक सेवा प्रदान गर्न को लागी जिम्मेवार छ, यसको सम्बन्धित राज्यहरु र अन्य बाहिरी क्षेत्रहरु सहित।
साथै, संयुक्त राज्य हुलाक सेवा, वा USPS, एक लोकप्रिय शिपिंग सेवा हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका र यसको सम्बन्धित राज्यहरु मा शिपिंग समाधान को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
यसबाहेक, यो संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार को प्रभारी को एक प्रसिद्ध स्वतन्त्र एजेन्सी हो देश भर मा राम्रो हुलाक सेवाहरु प्रदान गर्दै.
यसको सेवाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला को साथ र थाहा छ कि USPS पनि सप्ताहांत मा प्याकेजहरु उद्धार, USPS लोकप्रियता र प्रशंसक शक्ति मा बढेको छ लोकप्रिय बीच eCommerce व्यवसायहरु.
यसको सेवाहरु भौगोलिक स्थान को बावजूद उपलब्ध छन्। उनीहरु एक उचित मूल्य र सेवा को एक उच्च स्तर मा ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी समयमै डेलिभरी प्रदान गर्दछ।
USPS सप्ताहन्त मा डेलिभर गर्छ?
जब हामी USPS जस्तै एक कूरियर सेवा, पहिलो दिमागमा आउने प्रश्नहरु मध्ये एक हो कि उनीहरु सप्ताहांत मा डेलिभर हुन्छ।
आइतबार, एक पटक फेरी, प्रश्न बाट बाहिर छन् किनकि उनीहरु लाई व्यापक रूपमा आराम को दिन को रूप मा मानिन्छ। जे होस्, USPS सप्ताहन्त मा वितरण गर्दछ।
USPS द्वारा प्रस्तावित वितरण सेवाहरु को प्रकार
हामी सबै जान्दछौं कि USPS सप्ताहांत मा उद्धार गर्दछ, तर USPS ले निम्न घरेलु मेल र ढुवानी सेवाहरु पनि प्रदान गर्दछ:
प्याकेज वा मेल
प्राथमिकता मेल $$ १० - २१ दिन प्याकेजहरू
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस $$$ रातारात वा 1-2 दिन प्याकेजहरू
मिडिया मेल $ १० - २१ दिन प्याकेजहरू
USPS रिटेल ग्राउन्ड $ १० - २१ दिन प्याकेजहरू
प्रथम श्रेणी मेल $ १० - २१ दिन मेल
३. प्राथमिकता मेल
ढुवानी समय प्याकेज, मूल, र गन्तव्य मा निर्भर गर्दछ १ देखि ३ दिन सम्म दायरा।
प्राथमिकता मेल फ्लैट दर 70 एलबीएस सम्मको प्याकेज तौल्न को आवश्यकता लाई समाप्त गर्दछ। लागत $ 7.35 मा शुरू हुन्छ र दुबै अनलाइन र सबै हुलाक कार्यालय स्थानहरुमा उपलब्ध छ।
साथै, प्राथमिकता मेल सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो यदि तपाइँको प्याकेज वा मेल अधिक तौल छ 13 औंस भन्दा बढी र तपाइँ यसलाई छिटो र एक उचित मूल्य मा आवश्यक छ।
ढुवानी 1-3 दिन लाग्छ।
प्याकेज पिकअप नि: शुल्क छ, र USPS ट्र्याकि समावेश छ।
बीमा मा $ 50 को एक अधिकतम शामिल छ।
त्यहाँ कुनै इन्धन अधिभार छैन।
शनिवार वितरण मानक छ।
प्राथमिकता मेल: फ्लैट दरहरु
नि: शुल्क आपूर्ति
सपाट दर लिफाफा
12 "x 9" इन्च $ 6.95 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा वाणिज्यिक आधार को लागी $ 7.35 पांडुलिपि कागजात पत्र
विन्डो फ्ल्याट दर खाम
10 एक्स 6
12 "x 9" इन्च $ 6.95 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा वाणिज्यिक आधार को लागी $ 7.35 पूर्व-संबोधित लिफाफे
उपहार कार्ड फ्लैट दर लिफाफा
१.10..7 x XNUMX इन्च $ 6.95 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा वाणिज्यिक आधार को लागी $ 7.35 उपहार कार्ड ग्रीटिंग कार्डहरु कि oversized छन्
सानो फ्लैट दर लिफाफा
१.10..6 x XNUMX इन्च $ 6.95 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा वाणिज्यिक आधार को लागी $ 7.35 पासपोर्ट साना कागजातहरु
कानूनी फ्लैट दर खाम
15 x9"इन्च $ 7.25 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा वाणिज्यिक आधार को लागी $ 7.65 कानूनी कागजात
प्याडेड फ्लैट दर ईन्फाफा
12 "x 9" इन्च हुलाक कार्यालय: $ 8 (अनलाइन र रिटेल) वाणिज्यिक आधार $ 7.55 हो। बक्सेदार गहना किताबहरु कपडा
सानो फ्लैट दर बक्स
भित्र: 8 5/8 x53/8 x 1 5/8 इन्च
बाहिर: 8 11/16 x57/16 x 1 ¾ इन्च $ 7.50 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा व्यापारिक आधार को लागी $ 7.90 साना इलेक्ट्रोनिक्स ब्रोशर
ठूलो फ्लैट दर बक्स
भित्र: १२ x १२ x ५। इन्च
बाहिर: १२ ¼ x १२ ¼ x inches इन्च हुलाक कार्यालय मा, $ 19.95 (अनलाइन र रिटेल) वाणिज्यिक आधार $ 17.60 छ। ठूला उपहार, कम्प्युटर, ल्यापटप, आदि।
मध्यम फ्लैट दर बक्स - प्रकार १ (शीर्ष लोड)
भित्र: 11 x 8 "x 5" इन्च
बाहिर: 11 ¼ x 8 3/4 x6इन्च हुलाक कार्यालय: $ 14.35 (अनलाइन र रिटेल) वाणिज्यिक आधार $ 12.8 हो। जुत्ता कार्यालय आपूर्ति
मध्यम फ्लैट दर बक्स - २ प्रकार (साइड लोडि)
भित्र: 13 5/8 x 11 7/8 x33/8 इन्च
बाहिर: 14 x 12 x3"इन्च $ 14.35 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा $ 12.8 वाणिज्यिक आधार को लागी जुत्ता कार्यालय आपूर्ति
ठूलो फ्लैट दर बोर्ड खेल बक्स
भित्र: 23 11/16 x 11 "x3इन्च बाहिर: 24 1/16 x 11 7/8 x31/8 इन्च हुलाक कार्यालय मा, $ 19.95 (अनलाइन र रिटेल) वाणिज्यिक आधार $ 17.60 छ। बोर्ड खेल
प्याकेज को अधिकतम वजन 70 पाउण्ड हुनु पर्छ।
संयुक्त परिधि र लम्बाई १०108 इन्च भन्दा बढी हुनुहुँदैन।
जब एक सपाट दर बक्स वा लिफाफा सील, कन्टेनर को flaps सामान्य तह बन्द गर्नुपर्छ।
२. प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस
केहि अपवादहरु संग, यो सब भन्दा छिटो घरेलु सेवाहरु द्वारा प्रस्ताव गरीएको हो अमेरिकी डाक सेवा। यो एक वर्ष ३365५ दिन उपलब्ध छ र एक पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी समावेश छ।
साथै, यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै ठेगानाहरु लाई उद्धार गर्दछ, PO बक्सहरु सहित। मूल्य $ 25.5 मा शुरू हुन्छ र सबै हुलाक कार्यालय स्थानहरु र अनलाइन मा उपलब्ध छ। फ्लैट दर विकल्प 70 एलबीएस सम्म वजन प्याकेजहरु तौल को आवश्यकता समाप्त।
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो यदि तपाइँ तपाइँको प्याकेज छिटो वितरित गर्न चाहानुहुन्छ (रातारात) र एक प्रीमियम तिर्न मन छैन।
प्याकेज नि: शुल्क उठाईन्छ - या त तपाइँको अफिस मा वा तपाइँको घर मा।
रेकर्ड साथै USPS ट्र्याकि for को लागी एक डिजिटल हस्ताक्षर शामिल छ।
एक $ 100 बीमा नीति छ।
बिदा र आइतबार, रातभर वितरण एक अतिरिक्त शुल्क को लागी उपलब्ध छ।
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस: ​​फ्लैट दरहरु
कानूनी फ्लैट दर लिफाफा 15 x9"इन्च $ 25.7 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा $ 22.80 वाणिज्यिक आधार को लागी कानूनी कागजात
सपाट दर लिफाफा 12 "x 9" इन्च $ 25.5 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा $ 22.68 वाणिज्यिक आधार को लागी पांडुलिपि कागजातहरु
प्याडेड फ्लैट दर ईन्फाफा 12 "x 9" इन्च $ 26.2 हुलाक कार्यालय (अनलाइन र रिटेल) मा $ 23.18 वाणिज्यिक आधार को लागी किताबहरु बक्से गहना लुगा
3. प्रथम श्रेणी मेल
प्रथम श्रेणी मेल कम से कम महंगा USPS मेल सेवाहरु मध्ये एक हो। यो साना प्याकेजहरु र लिफाफेहरु पठाउने एक लागत प्रभावी र कुशल तरीका हो।
साथै, प्रथम श्रेणी मेल सदाका लागि टिकट, अर्कोतर्फ, वर्तमान मा १ औंस मा मूल्य छन्। जे होस्, उनीहरुको म्याद सकिदैन यदि उनीहरुको मूल्य बढ्छ।
यदि तपाइँको प्याकेज वा मेल १३ औंस वा कम तौल छ र तपाइँलाई यो राती वितरित गर्न को आवश्यकता छैन, प्रथम श्रेणी मेल सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।
यो को लागी आदर्श हो:
मानक आकार एकल टुक्रा लिफाफा 3.5 औंस सम्म वजन।
साना प्याकेजहरु 13 औंस सम्म वजन।
यसले तीन कार्य दिनहरुमा प्याकेज प्रदान गर्दछ। लागत $ 0.55 मा शुरू हुन्छ।
दूरी दर मा कुनै प्रभाव छैन।
त्यहाँ कुनै घर वितरण वा ईन्धन अधिभार छैन।
साना प्याकेजहरु को लागी, यो एक छिटो र कम लागत विकल्प हो।
1-3 व्यापार दिन मा वितरित
बीमा कवरेज मा $ 5000 (मात्र व्यापार)
१३ औंस। अधिकतम
कार्ड र अक्षरहरु को लागी, प्याकेज वजन को 3.5 औंस सम्म मुक्त छ।
मानक आकार टिकटहरु एक आयताकार पोस्टकार्ड को लागी $ 0.35 मा शुरू हुन्छ।
पत्र टिकटहरु ठूलो आकारका पोस्टकार्ड को लागी आवश्यक छ। तिनीहरू $ 0.55 को लागत मा शुरू हुन्छ।
मानक आकार टिकटहरु एक आयताकार लिफा को लागी $ 0.55 मा शुरू हुन्छ।
असामान्य आकारहरु संग खाम टिकटहरु, जस्तै oversized वर्गहरु, $ 0.70 मा शुरू।
प्रथम श्रेणी मेल पत्र ३.५ औंस भन्दा बढी तौल हुनुहुँदैन।
ठूला प्रथम श्रेणी मेल प्याकेज र लिफाफा १३ औंस भन्दा बढी तौल हुनु हुँदैन।
सबै खाम र पोस्टकार्ड आकार मा आयताकार हुनु पर्छ। अन्यथा, एक अतिरिक्त शुल्क लगाउन सकिन्छ।
4. मिडिया मेल
यो मात्र भिडियो, किताब, रेकर्ड, र सीडी को लागी उपलब्ध छ। जे होस्, मिडिया मेल को लागी केहि सीमाहरु छन्। आइटम एक राम्रो, प्याडेड लिफाफा मा राखिएको हुन सक्छ, तर एक नियमित, सादा लिफाफा मा अतिरिक्त प्याडिंग संग छैन।
एउटा किताब मनिला खाममा लपेटिएको बबल हुन सक्दैन। यदि तपाइँ एक बक्स को उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो केवल कुनै अतिरिक्त प्याडिंग संग किताबहरु हुनु पर्छ।
तपाइँलाई यो मा विज्ञापनहरु संग केहि पठाउन अनुमति छैन (जस्तै पत्रिकाहरु र अखबारहरु)। सबै मिडिया मेल प्याकेजहरु निरीक्षण को अधीनमा छन्।
यसको मतलब यो USPS लाई उनीहरुलाई खोल्न र निरीक्षण गर्ने पूर्ण अधिकार छ। यदि तपाइँ मिडिया मेल को माध्यम बाट पत्रिकाहरु वा समाचार पत्रहरु पठाउनुहुन्छ, ती एक डाक कारण सूचना संग फिर्ता गरिनेछ।
मिडिया मेल शैक्षिक सामग्री को लागी एक कम लागत विकल्प हो, तर यो USPS को "अन्तरिक्ष उपलब्ध" नीति को कारण ढिलो हुन सक्छ।
यसको मतलब यो हो कि अन्य सबै मेल प्रकारहरु पहिले ढुवानी गरीएको छ, र मिडिया मेल मात्र अनुमति दिईन्छ यदि त्यहाँ ठाउँ छ। यदि त्यहाँ पर्याप्त कोठा छैन, प्याकेज पर्खनु पर्छ।
मीडिया मेल ढिलो डेलिभरी को लागी कम शिपिंग दर मा किताबहरु र डीभीडीहरु को रूप मा शैक्षिक सामग्री पठाउन को लागी आदर्श छ। हुलाक कार्यालय $ २.2.75५ को एक प्रारम्भिक मूल्य चार्ज गर्दछ।
13 औंस भन्दा बढी तौल कुनै पनि आइटम को लागी सस्तो विकल्प।
साथै, प्याकेज को अधिकतम वजन 70 पाउण्ड छ।
मूल्य दूरी भन्दा वजन द्वारा निर्धारित गरिन्छ।
2-8 व्यापार दिन मा वितरित
तपाइँ मिडिया मेल संग के पठाउन सक्नुहुन्छ?
परीक्षण र मुद्रित संगीत को लागी सामग्री
शैक्षिक चार्ट छापिएको छ
कम्प्युटर द्वारा पढ्न मिडिया
ध्वनि र भिडियो रेकर्डि
पाठ्यपुस्तक (न्यूनतम pages पृष्ठ)
मेडिकल ढीला पाना पानाहरु र बाइन्डरहरु
कम्प्यूटर ड्राइव, डिजिटल ड्राइव, र भिडियो गेम मिडिया मेल को लागी योग्य छैन।
5. USPS रिटेल ग्राउन्ड
यो एक लागत प्रभावी र भरपर्दो प्याकेजहरु को लागी जमीन शिपिंग विकल्प हो। यो लाभदायक छ यदि तपाइँको प्याकेज को तत्काल वितरण को आवश्यकता छैन। यो ments० पाउण्ड भन्दा बढी तौल को लागी उपलब्ध छ।
यदि प्याकेज प्राथमिकता मेल को लागी आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दैन र "ठूलो" छ, रिटेल ग्राउण्ड मेल वर्ग मा विचार गर्नुहोस्।
प्याकेज 70 पाउन्ड सम्म वजन र लम्बाई र चौडाइ मा 130 इन्च सम्म मापन गर्न सक्नुहुन्छ।
USPS ट्र्याकि no कुनै लागत मा प्रदान गरीएको छ।
यो वितरण गर्न 2-8 व्यापार दिन लाग्छ।
USPS हुलाक कार्यालयहरुमा मात्र उपलब्ध छ।
उत्कृष्ट प्याकेजहरु कि प्राथमिकता मेल वितरण र प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस को लागी धेरै ठुलो मानिन्छ।
यो मात्र p० पाउण्ड सम्म तौल र १३० इन्च (लम्बाई र परिधि संयुक्त) सम्म मापन को लागी उपलब्ध छ।
Oversized मूल्य निर्धारण हल्का, ठूलो प्याकेजहरुमा लागू हुन्छ।
USPS आइतबार वितरण गर्दछ?
हो। USPS आइतबार वितरण गर्दछ, तर सामान्यतया मात्र प्राथमिकता मेल प्याकेज र अमेजन प्याकेज। ग्राहकहरु को बढ्दो मागहरु लाई पूरा गर्न को लागी आइतबार वितरण लगभग अपरिहार्य भएको छ।
शनिवार र आइतबार वितरण को लागत के हो?
यदि तपाइँ मूल्यहरु मा हेर्नुहुन्छ, तपाइँ त्यो नोटिस गर्नुहुनेछ शनिवार र आइतवार वितरण अतिरिक्त छैनन्। यो तथ्य को कारण हो कि यी सेवाहरु USPS सेवाहरु संग शामिल छन्।
लागत, कुनै पनी अन्य ढुवानी सेवा जस्तै, पुरा तरिकाले कारकहरु मा निर्भर जस्तै यात्रा गरीएको छ, ढुवानी सेवा चयन गरीएको छ, वजन र प्याकेज को आयाम, र यति मा। यहाँ के तपाइँ शनिवार र आइतबार वितरण को लागी तिर्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्राथमिकता पत्र - मूल्यहरु $ 6.40 मा शुरू; 70 पाउण्ड सम्म फ्लैट दर वितरण; नि: शुल्क वितरण सोमबार देखि शनिवार सम्म; वितरण 1-3 व्यापार दिन लाग्छ।
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस - मूल्यहरु $ 22.95 मा शुरू; 70 पाउण्ड सम्म फ्लैट दर शिपिंग; नि: शुल्क वितरण सबै वर्ष; वितरण 1-2 कार्य दिनहरु भित्र अपेक्षित छ
USPS शनिबार वितरण घण्टा के हो?
शनिबार USPS को वितरण समय सहित कारकहरु को एक संख्या द्वारा निर्धारित गरीएको छ:
मेल प्राप्त रकम
साथै, गोदाम बाट अन्तिम गन्तव्य सम्म को दूरी।
त्यहाँ शनिवार र पत्र वाहक को लागी कुनै अन्य दिन को बीच कुनै फरक छैन। एक पत्र वाहक स्वेच्छाले उसको बाटो छोड्दैन। उनीहरुले आफ्ना सबै दायित्वहरु पूरा गर्नु पर्दछ।
यदि ईमेल को संख्या वितरित गर्न को लागी कम छ, उनीहरु चाँडै अनुमानित भन्दा आउन सक्छन्। जे होस्, यदि उनीहरु लाई मेल को एक ठूलो संख्या छ, USPS वितरण समय विस्तारित हुन सक्छ।
शनिवार र आइतबार USPS को वितरण घण्टा
तपाइँ अब डिलीवरी को समय को बारे मा सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि USPS सप्ताहांत मा उद्धार गर्दछ। तपाइँको शनिवार डिलीवरी को लागी डेलिभरी समय पुरा तरिकाले मेल सेवा तपाइँ तपाइँको सटीक स्थान को रूप मा चयन को रूप मा निर्भर गर्दछ।
तपाइँ चयन गर्नुपर्छ प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस वा प्राथमिकता माईl यदि तपाइँ प्याकेज शनिबार आउन चाहानुहुन्छ। साधारणतया, USPS सप्ताहांत वितरण घण्टा स्थानीय हुलाक कार्यालय द्वारा निर्धारित छन्।
यस तथ्य को बावजुद कि अधिकांश हुलाक कार्यालयहरु संचालन को घण्टा सेट गरीएको छ, ग्राहकहरु कुनै पनि समय कियोस्क को उपयोग गर्न सक्छन्। नतिजाको रूपमा, शनिवार वितरण को बहुमत तपाइँको स्थान र एक पटक फेरि, तपाइँको स्थानीय हुलाक कार्यालय को काम को घण्टा द्वारा निर्धारित गरीन्छ।
जे होस्, तपाइँ भोलिपल्ट बिहान वितरणको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
आइतवार वितरण उपलब्ध छ, तर यो सीमित छ, शनिवार को वितरण जस्तै। जस्तै पहिले भनिएको छ, मात्र प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस र अमेजन प्याकेजहरु डेलिभर गरिनेछ।
साथै, वितरण समय पुरा तरिकाले स्थानीय हुलाक कार्यालय को समय मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, USPS कोलोराडो को Aurora मा बिहान and बजे र १ बजे को बीच मा उद्धार गर्दछ, जबकि USPS कोलोराडो को अन्य भागहरु मा ११ बजे र ३ बजे को बीच उद्धार गर्दछ।
USPS शिपिंग सेवाहरु- मूल्य र अपेक्षित वितरण मितिहरु
यो तालिका तपाइँ USPS सेवाहरु र वितरण दिनहरु को बारे मा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ, यदि USPS सप्ताहांत, शुल्क, र यति मा वितरण सहित।
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस
प्रथम श्रेणी मेल
USPS रिटेल ग्राउण्ड (मानक पोस्ट)
1-2 एक पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी संग व्यापार दिन 1-3 व्यापार दिन, तर ग्यारेन्टी छैन 1-3 व्यापार दिन, तर ग्यारेन्टी छैन 2-8 व्यापार दिन, तर ग्यारेन्टी छैन 2-8 व्यापार दिन, तर ग्यारेन्टी छैन
USPS वितरण दिनहरु
365 दिन एक वर्ष, शनि र सूर्य डिलिवरी शामिल सोमबार देखि शनिबार (बिदा बाहेक) तोकिएको छैन तोकिएको छैन तोकिएको छैन
मा सुरु हुन्छ $ 22.95 हुलाक कार्यालय स्थानहरु मा वा कुनै पनि राज्य को लागी अनलाइन; सम्म फ्लैट दर 70 lbs मा सुरु हुन्छ $ 6.45 हुलाक कार्यालय स्थानहरु वा अनलाइन मा; सम्म फ्लैट दर 70 lbs मूल्यहरु मेल/प्याकेज को आकार, वजन र आकार मा निर्भर गर्दछ मा सुरु हुन्छ $ 6.75 हुलाक कार्यालयमा मा सुरु हुन्छ $ 2.72 हुलाक कार्यालयमा
-सहित $ 100 बीमा
प्रमाण वितरण हस्ताक्षर रेकर्ड र ट्र्याकि। जानकारी को समावेश
रातभर वितरण, जो अर्को दिन 10:30 बिहान सम्म पुग्छ, छुट्टी र आइतवार वितरण उपलब्ध छन्
दुबै रिटेल र अनलाइन शिपिंग को लागी USPS ट्र्याकि समावेश छ
-$ 50 बीमा संग
ईन्धन को लागी कुनै अधिभार, वा ग्रामीण, आवासीय, र नियमित शनिवार वितरण
सबै भन्दा राम्रो मूल्य को लागी सेवा 13 ओउंस इमेल
-$ 5,000 व्यापार को मूल्य बीमा संग कभर छ। यो वितरण पुष्टि को लागी अन्य सेवाहरु संग संयुक्त गर्न सकिन्छ
-व्यापार को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प
-खुद्रा मा मात्र उपलब्ध छ
प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस र प्राथमिकता मेल मा समायोजित गर्न सकिदैन कि ठूलो प्याकेज को लागी छनौट
-को साथ USPS ट्र्याकिङ
-USPS ट्र्याकि संग
पुस्तकहरु जस्तै शैक्षिक सामग्री पठाउन मा लागत प्रभावी तरीका
-70lbs अधिकतम वजन
सामान्य तह संग सील फ्लैट दर लिफाफा ~ -अधिकतम वजन मात्र हो 13 ओउंस
- लिफाफे र पोस्टकार्ड आयताकार हुनुपर्छ। अन्यथा, एक अतिरिक्त शुल्क थप्न सकिन्छ
ship० पाउण्ड सम्मको तौल र ढुवानी को लागी मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ 130 इन्च (दुवै लम्बाई र परिधि संयुक्त)
-त्यहाँ ठूलो र हल्का प्याकेजहरु को लागी विशेष मूल्य निर्धारण छ
-अधिकतम वजन 70 पाउण्ड मा छ
-त्यहाँ मिडिया को प्रकार मा पठाइएको छ कि यो मात्र शैक्षिक सामग्री (भिडियो गेम, डिजिटल ड्राइव, कम्प्यूटर ड्राइव मिडिया मेल मूल्यहरु को माध्यम बाट पठाउन को लागी योग्य छैन) को रूप मा पठाइन्छ प्रतिबन्धहरु छन्।
के तपाइँ शनिवार र आइतबार USPS प्याकेज उठाउन सक्नुहुन्छ?
ग्राहकहरु USPS द्वारा प्रदान सेवाहरु को एक किसिम बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि USPS सप्ताहांत मा डेलिभर, यो पनि प्याकेज पिक-अप विकल्पहरु जो ती गर्न को लागी एक वैध कारण छ को लागी प्रदान गर्दछ।
तपाइँ बाट प्याकेजहरु उठाउन सक्नुहुन्छ USPS कार्यालयहरु यदि तपाइँ ट्र्याकि information जानकारी छ र केहि अपवादहरु, जस्तै यदि तपाइँ प्याकेज चाँडै आउन चाहानुहुन्छ वा यदि तपाइँ USPS बाट होल्ड अनुरोध मा अनुरोध गर्नुभयो।
USPS पिक अप प्याकेज को बारे मा तथ्य
किनकि यो USPS को जिम्मेवारी हो प्याकेजहरु र मेल उनीहरुको लक्षित गन्तव्यहरुमा समय मा वितरित गर्न को लागी, त्यहाँ समयहरु छन् जब ग्राहकहरु निर्धारित वितरण मिति वा समय भन्दा पहिले उनीहरुलाई चाहन सक्छन्।
यदि तपाइँ ट्र्याकि number नम्बर र निम्न अपवाद छ, तपाइँ USPS बाट प्याकेज उठाउन सक्नुहुन्छ।
1. आवश्यकता जरुरी छ
तपाइँ सहायता को लागी USPS ग्राहक सेवा लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ एक तत्काल स्थिति हो कि बेवास्ता गर्न सकिदैन (उदाहरण को लागी, तपाइँ शहर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ) र जतिसक्दो चाँडो मेल वा प्याकेज चाहिन्छ।
ग्राहकहरु केहि प्याकेजहरु मा आफ्नो प्याकेज वा मेल उठाउन सक्छन्, तर मात्र यदि कारण वैध छ। यो वाहकहरु को लागी तपाइँको घर मा पुग्न को लागी दिन लाग्न सक्छ।
यसैले यो घर वितरण रद्द गर्न र यस्तो समयमा हुलाक कार्यालय बाट प्याकेज उठाउन को लागी बेहतर छ।
२. USPS हरायो
यदि तपाइँ घर डेलिभरी रोज्नुभएको छ, यो सम्भव छ कि तपाइँ एक हस्ताक्षर को लागी सोधिन्छ जब प्याकेज आउँछ। यदि यो मामला छैन, तपाइँ तपाइँको प्याकेज डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ उपलब्ध हुनुहुन्न।
जे होस्, डिलिवरी केटा वा डाकियाले रिसीभर बाट प्राधिकरण माग्नेछन्, जुन तपाइँले पहिले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, वा सम्भवतः केहि अवस्थामा कार्यालय बाट एक पूर्व प्राधिकरण।
यदि स्थिति पहिलो दुई परिदृश्य मध्ये एक मा फिट छैन, वाहक तपाइँको प्याकेज फिर्ता वा नजिकैको हुलाक कार्यालय मा छोड्न सक्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको पर्ची र एक वैध पहिचान कार्ड वा सुरक्षा कारणहरु को लागी आईडी ल्याउनुहुन्छ भने उनीहरु तब सम्म प्याकेज उठाउन दिन्छन्।
3. अनुरोध मा पकड
USPS प्याकेज अवरोध कार्यक्रम एक सुविधा होल्ड अनुरोध मा अनुरोध छ कि विशेष गरी मानिसहरु जो विपरीत दिशा मा आफ्नो प्याकेज उठाउन चाहानुहुन्छ को लागी डिजाइन गरीएको छ।
यसको मतलब यो हो कि तपाइँ प्रेषक हुनुहुन्छ, र तपाइँको प्याकेज हराएको छ, वा तपाइँको आइटम अझै पनी जारी वा वितरित गरिएको छैन, र तपाइँ यसलाई फिर्ता चाहानुहुन्छ।
तपाइँ यस प्रकार को सुविधा को लागी प्रेषक को ठेगाना संग यस्तो समय मा शामिल गर्न को लागी अनुरोध गर्नु पर्छ। जे होस्, त्यहाँ एक शुल्क तिर्नुपर्छ। कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि यो शुल्क फिर्ता योग्य छैन।
USPS प्याकेजहरुमा सुझाव
त्यसोभए, कसरी तपाइँको ढुवानी संग केहि मुद्दाहरु बाट बच्न को लागी? ठिक छ, यो माथिको उल्लेख पिकअप टाउको दुखाई बाट तपाइँलाई बचाउन सक्षम हुन सक्छ।
निस्सन्देह, पनी बचाउन सकिदैन, विशेष गरी आपतकालिन अवस्थामा। जे होस्, यदि तपाइँ एक ग्राहक जो विषाक्त छ, यहाँ केहि सुझावहरु छन् तपाइँ मेलिंग मुद्दाहरु बाट राख्न को लागी।
तपाइँ एक पिकअप अनुसूची गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको मेल एक हुलाक कार्यालयमा लैजानुहोस्, यसलाई तपाइँको घरको मेलबक्समा छोड्नुहोस्, वा यसलाई नीलो संग्रह बक्समा छोड्नुहोस्।
यदि तपाइँको आइटम 13 औंस भन्दा बढी तौल छ, यो हुलाक कार्यालय को खुदरा काउन्टर मा लिनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको डाक टिकटहरु ठाउँ मा छन्।
एक पिकअप अनुसूची गर्न को लागी, तपाइँको अनुरोध अनलाइन पेस गरेर शुरू गर्नुहोस् र तपाइँका सामानहरु तयार हुनु अघि वाहक आउँछ।
तपाइँको मेल मा एक होल्ड राख्नु भन्दा पहिले पोस्ट अफिस बाट होल्ड मेल फर्म भर्नुहोस्। USPS को भ्रमण गर्न को लागी याद गर्नुहोस् वा हुलाक सेवा द्वारा ३० दिन को लागी तपाइँको आइटम राखिएको मा अधिक जानकारी को लागी ग्राहक सेवा लाई कल गर्नुहोस्। तपाइँ हुलाक कार्यालय मा तपाइँको मेल उठाउन सक्नुहुन्छ वा यो तपाइँको घर मा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ।
USPS प्याकेजहरुमा अधिक सुझाव
सम्झनुहोस् तपाइँको ढुवानी ठेगाना हरेक समय अपडेट गर्नुहोस् तपाइँ एक घर स्थानान्तरण को लागी बाहिर जानुहुन्छ यदि तपाइँ सधैं सार्दै हुनुहुन्छ।
जब यो हुलाक टिकट मुद्रण गर्न को लागी आउँछ, तपाइँ यति छिटो र सजीलै अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय हुलाक कार्यालय को यात्रा को आवश्यकता लाई हटाएर।
तपाइँको हस्ताक्षर मात्र तपाइँको पत्राचार को रूप मा महत्वपूर्ण छ। तपाइँको हस्ताक्षर वस्तुहरु को रसीद स्वीकार गर्दछ। ध्यान राख्नुहोस् कि जब तपाइँ यो गर्नुहुन्छ, हुलाक सेवा तपाइँलाई दायित्व बाट मुक्त गर्दछ। सुरक्षा कारणहरु को लागी, तपाइँ गर्नुपर्छ प्रेषक को जानकारी, जस्तै नाम र ठेगाना को पुष्टि गर्नुहोस्, जब तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ यो लेख USPS सप्ताहांत मा उद्धार गर्नुहुन्छ र यो तपाइँलाई धेरै सहयोगी थियो र तपाइँको प्रश्न को उत्तर दिन को लागी USPS सप्ताहन्त मा डेलिभर गर्न को लागी माया गर्नुभयो।
यदि तपाइँ USPS को बारे मा कुनै प्रश्न वा सुझाव छ र यदि उनीहरु सप्ताहांत मा डेलिभर, कृपया राम्रो संग एक टिप्पणी छोड्नुहोस् र यो पनि, तपाइँका साथीहरु संग यो लेख साझा गर्नुहोस्।
टैग:एक्सप्रेस मेल आइतबार आउँछ, usps शनिवार र आइतबार प्रदान गर्दछ, usps रविवार २०२१ मा वितरण गर्दछ, usps रविवार २०२० मा वितरण गर्दछ, शनिवार मेल वितरण २०२०, usps प्राथमिकता मेल, मेरो क्षेत्रमा शनिबार मेल कती समय वितरित हुन्छ?, युएसपीएस कती समय प्रदान गर्दछ
महान क्लिप २०२१: मूल्यहरु, सैलुन घण्टा, सेवाहरु र उत्पादन बेचेको
उच्च लाभांश स्टक २०२१ अपडेट: लाभ र सम्भावित पतन
मेरो नजिक थाई खाना कि सर्वश्रेष्ठ थाईल्याण्ड व्यंजनहरु प्रदान गर्दछ
हिड्ने, दौडने वा नर्सहरु को लागी जो सबै दिन खडा को लागी सर्वश्रेष्ठ नाइके जूता
संसारको सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरु र छुट्टी को लागी अद्भुत क्यारिबियन टापुहरु
सर्वश्रेष्ठ पुरुष Deodorants र अद्भुत AntiPerspirants ताजा रहन को लागी
अनुहार र सबै छाला प्रकार र उनीहरुको अद्भुत लाभ को लागी सर्वश्रेष्ठ Exfoliators
Netflix मा सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर र २५ सबैभन्दा धेरै Suspenseful फिल्महरु हेर्न को लागी